Imithi yesintu isiyingxenye yokuphila kwethu. I-niche ehlukile yindlela yokwelapha yezifo ezinomuthi. Esinye sezitshalo ezisetshenziswe kaningi ngeqoqo lezimfanelo zokwelapha yi- saber esondayo. Ukungafani kokusebenzisa le mithi kukhona, kodwa akubalulekile. Ngenye indlela lesi sitshalo sibizwa ngokuthi "deco", noma "ginseng yaseRussia".
- izimpande zamasiko.
Ukuqoqa amaqabunga kufanele kube ngesikhathi sokubhakabhaka se-saber (ekuqaleni-phakathi kwehlobo). Le nkathi isitshalo sinempahla ewusizo kakhulu. Izimpande zamasiko ziqoqwe ekwindla sekwephuzile, emva kweqhwa lokuqala. Uma ziqoshwe kahle futhi zomisiwe, kufanele zibe mnyama.
Ngaphambi kokwelashwa, udinga ukuthola ukuthi i-swamp saber iyini. Ukuqhathaniswa nokwaziswa okuphulukisayo kwesiko kumele kwaziwe ngokusetshenziswa kahle, ngoba ukulungiselela amakhemikhali kungalimaza ngokungafundi.
I-Sabelnik marsh: uhlelo lokusebenza kanye nezakhiwo zokwelapha
Amasiko anemiphumela elandelayo yokwelapha kumuntu:
Lesi sitshalo sisetshenziselwa ukwelapha izifo eziningi:
Ama-joint (i-arthritis, i-sciatica, i-rheumatism);
Isiphambano (isb., I-hernia, i-deposit of salts);
I-Cancer nezinye izicubu;
Uhlelo lwesisu lokuzala;
Amanxeba amancane (ama-purulent).
I-stomatitis, isifo sezinsini, isifo se-prostate nesifuba sebele, i-leukemia, umdlavuza nezinye izifo eziningi ezingakwazi ukunqoba imvula yamanzi. Ukusetshenziswa kwe-tincture yalo muthi kuyoholela ekuqinisekiseni ukuthuthukiswa kokuzivikela komzimba nokuthuthukiswa kombono. Futhi kusukela esitshalweni kukhona ama-decoctions alungisiwe wokungenisa, yenza ama-lotions. Isikhathi sokusetshenziswa kwezidakamizwa sihlukile, kuye ngokuthi ubunzima besifo. Ngokwesibonelo, ukwelashwa kwezidakamizwa kubalulekile ukuphuza i-bog saber ngonyaka. Azikho ukuphikisana kwesikhathi sobuciko. Ukusetshenziswa isikhathi eside kwesitshalo kufanele kuthathe amakhefu kusukela ngesonto elilodwa kuya enyangeni. Ukwelashwa okuningiliziwe kufanele kucaciswe udokotela.
I-Sabelnik marsh: ukulungiselela imithi
Ukuze ulungiselele i-decoction kusukela ezinhlobonhlobo, kufanele igaye, kanye no-15 g weyingxube etholakalayo, uthele ama-200 g wamanzi abilayo. Okulandelayo, imithi kufanele ifudumele ngethawula noma ithululelwe ku-thermos - kufanele iphuze kahle. Kungcono ukupheka i-sabelnik kusihlwa bese uhamba ubusuku bonke. Ekuseni ungadla i-decoction ye-2 tbsp. Amathisipuni kathathu ngosuku ngaphambi kokudla ukudla.
Ukuze uvimbele umdlavuza futhi uphulukise, itiye lisetshenziselwa amaqabunga esiko. Ukupheka kubalulekile 1,5-2 st. I-Spoon saber ibeke 0.5 amalitha amanzi abilayo. Umuthi udinga ukuphoqelelwa, bese uwukhipha. Thatha kufanele kube izikhathi ezingu-1-2 ngosuku njengetiye.
Uma ukwephulwa emsebenzini wesisu (ukukhungatheka, ukuqothulwa) kusetshenziswa izimpande zesitshalo. Ngaphambi kokuqala kufanele ilandelwe ngesilinganiso se-tbsp engu-1. Spoon 250 g amanzi abilayo. Benga okungenani amahora amabili, isihlungi. Ungasebenzisi izikhathi ezingaphezu kwezingu-4 ngosuku ngesigamu seglasi ngesikhathi esisodwa. Ukuze kube lula, ungakwazi ukulungiselela usuku ingxenye emibili yomuthi.
I-Sabelnik marsh: ukuphikisana nokulashwa
Uma uphatha lesi siko, kufanele ukhumbule ngemiphumela yaso eyingozi uma kungenjalo ukungahambisani nezincomo zodokotela. I-Contraindicated ukusebenzisa i-sabelnik:
Ngokungaboni ngaso sonke isikhathi.
Ungazibandakanyi nemithi yokwelapha, ngaphambi kokusebenzisa i-saber ye-swamp, uzothola izincomo zikadokotela ophethe.
I-Lemongrass isiShayina: impahla yokwelapha kanye ne-contraindications
Indlela sikhule kusukela echibini itshe ekhaya?
Andrei Rublev: master imidwebo
Ulwazi - force. Ubani adumileyo wathi?
Lo mbhikisho we Chernigov Regiment futhi isifundo umlando
Sciatica: Ukutadisha zokugula
Ubani iphuza a sokwazi izilimi? Kuyini noma ubani?